XOG: Madaxweyne Deni oo kulan xasaasi la yeeshay Gaas iyo Faroole, warbixinta & digniin ay siiyeen – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
XOG: Madaxweyne Deni oo kulan xasaasi la yeeshay Gaas iyo Faroole, warbixinta & digniin ay siiyeen
January 15, 2022 Xuseen 4
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa xalay kulan albaabadu u xiran yihiin la qaatay Madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole.
Kulanka ayaa looga hadlayay xaalada gobalka Bari, dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso ee salka ku hayay xil ka qaadistii Madaxweyne Deni ku sameeyay Agaasimihii PSF, iyo dadaaladii xal raadinta ahaa ee ay wadeen Isimmada Puntland iyo siyaasiyiinta.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay P-TIMES, in Cabdiweli Gaas iyo Cabdiraxmaan Faroole, ay u gudbiyeen Madaxweyne Deni inay kusoo fashilmeen xal u helida dagaaladii ka dhacay Boosaaso iyo xiisada PSF, ayna la kulmeen waxyaabo is diidan, sida Boqor Burhaan Boqor Muuse oo taageersan Agaasimihii PSF ee xilka laga qaaday, garabna uga raadinaya beelaha gobalka Bari.
Sidoo kale, Madaxweynayaashii hore ayaa kula taliyay Siciid Deni in uu cagta u dhigo xiisada magaalada Boosaaso, waqtina siiyo waxyaabaha is diidan, uuna tago magaalada Boosaaso, si loo furfuro guntumaha isku xirmay ee kasoo horjeeda Xukuumaddiisa, kuna lamaan xiisada PSF.
Saraakiil kamid ah Madaxtooyada Puntland ayaa inoo sheegay in Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni, uu aqbalay talo soo jeedinta Faroole iyo Gaas. Kulanka oo qaatay saacado badan ayaa sidoo kale looga hadlay arrimo xasaasi ah oo la xariira doorashooyinka DFS, iyo colaadaha kale ee ka jira deegaanka.
MULKIILAYAASHA PUNTLAND MS.
Haddii ilmo Diyaano ahaan lahaayeen beelo kale kkk cathar adag ayaa loo dhigi lahaa.Federalka Somaliyey waa kaas.
aduun ikhatal sharwadyaal bad tihiin somaliyee wax ini kala celinkara majiraan maryaha sidataan miyir malihidin habar qabihii somali la dhihijiray baa waalida ini ku dhalay idinka is cunaaya ayaa qiyaamuh dhicin dad waxaa tihin xolaha waxaba dhaamin bal maxaa inii diiday wax khayr leh qortaan dadka u ducaysaan tala keentaan oo nasteexaysaan.Xalay waxaan firsaday barnaamij nimaan kheeyr qaba samayeen midbaa xamar ka sameeyay warshed calafka xoluh cunaa soo saarta midkale malay(kalun) garowe ka qaada itopia geeya 3boql buu shaqa u abuuray kuwa kale berbera waxay ka samayeen warshad soo saarta masaamiirta iyo jiingadaha guryaha lagu dhiso iyo wershed qamadiga soo saarta wilashaa xalo dhan waa uducaynaayay marka walaalayaal belo iskudir diig daata shaqa haka dhiganina
Kollay anigu reer Puntland ma ihi ee. Somalilander ayaan ahay,waxayse ila tahay xaajadan inaan wax ka dhihi karo siday iila egtahay maadaama dadka arrin dhex yaallaa soomaali yihiin,deris, gacal ah.
Deni bakhylnimada hayska daayo oo lacag ha siiyo isimada iyo maliishiyada kasoo horjeeda xal waa imane.
Malyuun iyo badh baa soo afjari xiisadda Bosaso.
Isimada malyuunka ha qaybsadaan,ina Diyaano,ciidanka uu wato $500.000 ayaa ka badan,ciidankana waaba iskaga baxayan.
Soomaali waa hunguri,haddii odayaal xaajo aad rabto inay dhameeyaanna qarash la’aan waxba ma qabtaan sidan Ku ogaa.
Faro aan Dufan lahayn wax ma duugaan bay hore u yidhaahdeen soomaali.
Dhaqanka iyo dabeecadaha soomaalida in hoggaanku wax ma yaqaanno waa muhiim,waxna Ku kala furfuro gacan furnaan.
Gacan gudhan iyo nin cid u taliyaana lama amaanin.
Ninka qasnadda umadda fadhiya odayaashu waa soo egaayaan,waxayna ka sugayaan sooryo,iyo in kaalintooda la aqoonsado,haddii kale bulshaduun bay kaa hor keeni,waana khatar,waase qaab ay lacag uga ritaan ninka aanay waxba ka helayn amaba cid kale ayaa kaa horkeeni oo wax u dhiibi.
Xaaraan weeye kollay,balse waxa lagu daweyn shaqaaqo iyo fidmo ka weyn,laba dhibna ta yar ayaa la qaataa.
XALKU WAA INTAAS.
ILAAHAY AJRI HAYGA SIIYO TALADAAS IYO SAMO TALISNIMADAA AAN SHEEGAY
Waa iga daacad….
Allaha ka ajarsiiyo salax